အခြားစီမံကိန်း | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ၊ အတန်းဖော်များ၊ ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်နှိပ်လိုက်ပါကမက်ဆေ့ခ်ျအောက်တွင်ပုန်းနေပါ၊ နောက်မှသူတို့ကိုမည်သို့မြင်ရမည်နည်း။
ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ ဦး၊ အတန်းဖော်တွေဆိုရင်ငါခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်မက်ဆေ့ခ်ျအောက်မှာပုန်းနေပါ၊ နောက်မှသူတို့ကိုဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ။ လျှို့ဝှက်စာပေးစာယူကိုပြန်လည်ရယူရန်စာတိုက်မှစာအဆက်အသွယ်အားလုံးကိုအတိုချုပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။
မေးလ် ru ရှိလူများအဘို့အရှာဖွေဘယ်လိုနေသလဲ?
Mail ru ရှိလူများကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။ my world တွင်ရှာဖွေပါ။ Safar salmanov@mail.ru ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်၊ ပြီးနောက်ရှာဖွေရန် ငါ Artem Maltsev နှင့်အတူသဘောတူသည် ငါသူ့ကိုထား
PIN ကို codes တွေကို varfeys
ဒီကုဒ်ကကျွန်တော့်ကို imvu credit code ပေးပြီးတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မယုံဘူး! သင်ခရက်ဒစ်လာချင်လျှင် http://imvucreditsgenerator.com တွင် ၀ ယ်သည်။
Avatar မှာတော့တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင် bytro
Avatar အတွက်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာပြီးမြောက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း။ လွယ်ကူသောအလုပ်များကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။ သို့သော်ရွှေအတွက်သင့်အတွက်ခက်ခဲသော (ရှိလျှင်) ရွှေအတွက် Adeline ATP! Avatar တွင်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုမျိုးမရှိ - ...
Cloud@mail.ru ဆိုသည်မှာ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Cloud သည်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ (မည်သည့် Mail.Ru အသုံးပြုသူမဆို Cloud ၌ 100 GB နေရာလွတ်ရရှိသည်။ )
အဘယ်အရာကိုနှစျတှငျ sots.set အဆက်အသွယ်ရောက်သလော
VKontakte လူမှုကွန်ယက်သည်အဘယ်နှစ်တွင်ပေါ်လာခဲ့သနည်း။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဟုတ်ပါတယ်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်။ VK သည်ဘယ်လောက်ကြာကြာတည်ရှိမလဲ။ ဤတွင် http://timemit.net/index.php?name=timersamp;op=viewamp;id=2006 လူမှုကွန်ယက်ဖန်တီးမှု၏အချိန်အတိအကျကိုသင်ရှာဖွေနိုင်ပြီး ...
သင့် browser Amigo ကနေကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားဘယ်လိုနေသလဲ? ယင်း setting တွင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုကြပြီလော
Amigo browser မှကြော်ငြာများကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။ ချိန်ညှိချက်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုရှိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ အွန်လိုင်းစကင်နာကိုသုံးရန်သင့်အားအကြံပေးသည်၊ များစွာသောသူသည်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်သူ့ကိုနင်းသော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
အတန်းဖော်များစာမျက်နှာကိုပိတ်ထားသည် ဘယ်လိုပိတ်ဆို့မလဲ ငါ့အဖြေကိုသွား ပိုပြီးအသေးစိတ်ရှိပါတယ်။ နှင့်လင့်များနှင့်အတူ။ အကယ်၍ စာမျက်နှာကို moderator မှပိတ်ဆို့ထားပါကပိတ်ဆို့ခြင်း၏အကြောင်းပြချက်များကိုရှင်းပြရန်တောင်းခံချက်ဖြင့်သူ၏လိပ်စာသို့စာတစ်စောင်ရေးသင့်သည်။
အဘယ်အရာကိုနှစျတှငျ Pushkin သေဆုံးခဲ့
၁၈၃၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်တွင်အေအက်စ်ပီရှစ်ခ်ျကွယ်လွန်သွားသည်။ ဇနီးဖြစ်သူ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုခုခံကာကွယ်သောပက်ရှ်ကန်းသည်ပြင်သစ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂျေဒန်တိတ်နှင့်ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ၁၈၃၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်၊
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှနိုင်ငံတစ်ခုမှစာမျက်နှာတစ်ခုကိုမည်သို့ဖျက်မည်နည်း။ သင်ချိန်ညှိချက်များတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖျက်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကွယ်လွန်သွားသောသူငယ်ချင်းများနှင့်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း၊ စာမျက်နှာများရှိနေသည်။ နိုင်ငံ၏ဓာတ်ပုံတစ်ခုမှပရိုဖိုင်းကိုသင်မဖျက်နိုင်ပါ။
prompt ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းနံပါတ်ထောက်ခံမှု mail.ru
mail.ru ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကမှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာအီးမေးလ်ကို hack လိုက်တယ်။ ? ငါ့အကောင့်ပိတ်ထားသည်ငါ့ကမ္ဘာ qiwi ပိုက်ဆံအိတ်ဟာမှော်မဟုတ်ပါဘူး ...
authentication ကားအဘယ်သို့နည်း စာရင်းစစ်သည် http: //ru.wikipedia.org/wiki/RRSRRRSRS: RSSRSRSRSRRRSRS ဖြစ်သည်။ Authentication L9; သူတင်ပြသောသတ်မှတ်သူလက်လှမ်းမီမှုဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်ေသာခွဲတမ်း (eng ။ Authentication) စိစစ်ခြင်း၊ စစ်မှန်၏အတည်ပြုချက်။ ၁ စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မရောနှောသင့်ပါ။ authenthenticator - ...
အပြင်လူတွေကစာမျက်နှာကိုမကြည့်နိုင်အောင်အတန်းဖော်တွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျွန်ုပ်သည်သီးသန့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ၀ န်ဆောင်မှုမရှိပါ။ အခြားအသုံးပြုသူများကိုသင်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုမလိုလားပါက ...
အကယ်၍ "အတန်းဖော်များ" တွင်သင်မမြင်ရသောစာမျက်နှာသို့သွားလျှင်ထိုသူသည် "မမြင်ရသောလူ" ထဲသို့ဝင်လာသည်ကိုတွေ့နိုင်သလော။
အကယ်၍ "အတန်းဖော်များ" တွင်မမြင်ရသောစာမျက်နှာသို့သွားပါက“ မမြင်ရသော” ၀ င်ရောက်မှုကိုထိုသူကမြင်နိုင်ပါမည်လော။ ဆိုက်တွင်ရှိသောသူငယ်ချင်းများသည်စာမျက်နှာ၏ဘေးထွက်မဟုတ်သော်လည်းအောက်ခြေတွင်ကြည့်ရှုရန်လူတိုင်းကိုလိုအပ်သည်။
Avatar အတွက်ငွေကြေးနှင့်ရွှေတွေအများကြီးလုပ်ဖို့ဘယ်လို? Avatar
avatar တွင်ငွေနှင့်ရွှေမည်ကဲ့သို့လုပ်ရမည်နည်း။ Avatar လူတွေ၊ ငါအရမ်းအံ့အားသင့်မိတယ်။ ရွှေကိုအခမဲ့ရယူဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် လုံးဝခက်ခဲသည်မဟုတ်! ယေဘုယျအားဖြင့်, ဆုကိုလည်းကောင်းလှ၏ ...
Cloud@mail.ru မှပစ္စည်းများမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။ Cloud ရှိဓာတ်ပုံတစ်ပုံပါသော folder တစ်ခုကိုမတော်တဆဖျက်မိလျှင်ဘာလုပ်သင့်လဲ ???? လိုချင်သောဖိုင်ကို ရွေးချယ်၍ "သိမ်းဆည်းရန်တိမ်တိုက်သိမ်းဆည်းရန်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အလိုရှိသောဖိုင်ကိုမိုးတိမ်သို့ကူးယူပါ။
အတန်းဖော်များအခြေအနေကိုမည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။ Status ဆိုသည်မှာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိသင်၏ဓာတ်ပုံအထက်ရှိစာတိုလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ status များကိုကွန်ရက်များတွင်သင်၏ဇာတ်ကောင်ကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါ VC ကိုသစ်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို?
VK ဒီဇိုင်းအသစ်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။ ၁။ vk.com/help ကိုထောက်ပံ့ရန်ရေးရန် ၂။ ခေါင်းစဉ်ကိုထည့်သွင်းပါ။ ပြန်လည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကို http://new.vk.com/blogclick သို့ဝင်ရောက်ပါ။ စမ်းသပ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ရန်အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပြsupportနာအားပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ ...
လူတယောက်အား "cloud" မှတစ်ဆင့် mail သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းမည်နည်း။
လူတယောက်အား "cloud" မှတစ်ဆင့် mail သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းမည်နည်း။ ပထမ ဦး စွာဖိုင်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ရမည်။ လိုအပ်သောဖိုင် (သို့) ဖိုင်တွဲကိုအမှတ်အသားပြုပြီးစာမျက်နှာ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင် "အများပြည်သူမျှဝေခြင်း ...
သင့်ရဲ့ PC ကိုမှဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ဘယ်လို
ဗွီဒီယိုကိုကွန်ပျူတာကနေဘယ်ကနေ download လုပ်ရမလဲ။ mail.ru ကနေလား ဗီဒီယိုကိုလင့်ခ်လုပ်ကြည့်သည်။ တိုးချဲ့မှုအပြောင်းအလဲနှင့် v ကိုထည့်သွင်းထားသည် - အင်တာနက်မှဗွီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း လွယ်ပါတယ်! ဤဗီဒီယိုအားလုံး၊
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,842 စက္ကန့်ကျော် Generate ။